Faah faahin:- Weerarkii saldhiga degmada Waaberi iyo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerarkii saldhiga degmada Waaberi iyo qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay (DHAGEYSO)
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa qarax gaari loo adeegsaday oo duhurnimadii maanta lagu weeraray saldhiga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qof naftii hallige ah oo watay gaari noociisu yahay kuwa raaxadda ah ayaa la sheegayaa inuu gaariga ku dhuftay saldhiga degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, halkaasi oo ay ku sugnaayeen saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Maxamuud Sayid Carab oo warbaahinta kula hadlay goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegay in qaraxii maanta ay Al-shabaab ku qaadeen saldhiga degmada Waaberi uusan wax qasaare badan geysan.
“Ma dhicin wax qasaare badan, waxaa qaraxa ku geeriyootay 5 qof oo kaliya, 7 qof kalena waa ku dhaawacantay, waxaa qaraxaasi fashiliyay ciidamada u taagan ammaanka, ma jiraan wax ciidan ah oo qaraxaasi qasaare kasoo gaartay” Sidaasi waxaa yiri afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Maxamuud Sayid Carab.
Marka laga soo tago hadalka afhayeenka wasaaradda amniga ayaa hadane waxaa la xaqiijiyay in ku dhawaad 10 qof ay qaraxaasi ku dhimatay, iyadoona dhaawaca uu intaasi ka badan yahay, waxaana dadka dhaawacmay ku jiray wasiirkii dhalinyarada iyo isboortiga ee maamulka Jubbaland Maxamed Maxamuud Yuusuf (Awlibaax), kaas oo markii dambe dhaawaciisa u geeriyooday.
Dadka kale ee dhaawacmay ayaa waxaa loola cararay Isbitaallada ku yaalla magaalada Muqdisho, wuxuuna qaraxaan sidoo kale burbur aad u xoogan u geystay guryaha ku yaalay agagaarka saldhiga degmada Waaberi.
Dhinaca kale, Xarakada Al-shabaab ayaa sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi maanta lagu qaaday saldhiga degmada Waaberi, waxayna sheegeen inay dileen saraakiil iyo askar badan oo halkaasi ku sugneyd.
Xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa haatan ah mid degan, waxaana muuqaalo laga soo duubay qaraxa uu muujinayaa in burbur baahsan uu gaaray dhismayaasha ku yaalla agagaarka saldhiga degmada Waaberi.